ज्यान दाउमा लगाउन ३० हजार जना तयार, कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुन चाहन्छन् – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/ज्यान दाउमा लगाउन ३० हजार जना तयार, कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुन चाहन्छन्
ज्यान दाउमा लगाउन ३० हजार जना तयार, कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुन चाहन्छन्
काठमाडौं। विश्वभर प्रभावकारी कोरोना भ्याक्सिन बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, आम रुपमा भ्याक्सिन तयार गर्ने प्रक्रिया निकै ढिलो हुन्छ । यो गतिमा तीब्रता ल्याउन एक संस्थाले अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियान अन्तर्गत स्वस्थ स्वयंसेवीहरुको सूची तयार गरिँदैछ । यी स्वयंसेवकहरु भ्याक्सिनको परीक्षणको लागि जानीजानी कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुन तयार छन् ।
वाशिङटन पोस्टका अनुसार ‘वन डे सूनर’ नामक अनलाइन संस्थाले अभियान सुरु गरेको हो । यो अभियान अन्तर्गत संस्थाको वेबसाइटमा विभिन्न देशका मानिसहरुले स्वयंसेवक बन्नको लागि आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छन् । संस्थामा अहिलेसम्म ३० हजार १०८ स्वयंसेवक जुटिसकेका छन् ।
आम रुपमा हुने परीक्षणमा मानिसहरुलाई भ्याक्सिन दिइन्छ तर उनीहरुलाई जानीजानी संक्रमित गरिँदैन । भ्याक्सिन दिएपछि वैज्ञानिकले त्यो व्यक्ति आफैं संक्रमित होस् र उसको शरीरमा भएको प्रतिक्रिया थाहा होस् भन्ने प्रतिक्षा गर्छन् । तर यसरी परीक्षण गर्दा धेरै लामो समय लाग्छ र कुनै समुदायमा संक्रमणका केसहरु घटे पनि त्यो स्वयंसेवक संक्रमित हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन ।
वन डे सूनर नामक यो संख्याले ह्युमन च्यालेन्ज ट्रायलको वकालत गरिरहेको छ । संस्थाले जो स्वयंसेवकहरु संक्रमित हुनका लागि तयार छन् उनीहरुलाई पहिले भ्याक्सिनको डोज दिइयोस् त्यसपछि जानीजानी संक्रमित गरियोस् भन्ने चाहेको छ । यसो गर्दा भ्याक्सिनको नतिजा चाँडै आउने र लाखौं मानिसलाई बचाउन सकिने संस्थाले दावी गरेको छ ।
यद्यपि यो संस्थाको चाहनाबमोजिम अहिलेसम्म कुनै पनि देशका स्वास्थ्य एजेन्सीले स्वयंसेवकलाई जानीजानी संक्रमित गर्न अनुमति दिएका छैनन् । केही व्यक्तिको लागि यो भाइरस प्राणघातक समेत हुने भन्दै ह्युमन च्यालेन्ज ट्रायलको अनुमति दिइएको छैन । यद्यपि ह्युमन च्यालेन्ज ट्रायलको विषयमा बहस भने सुरु भइसकेको छ ।
युवती भन्दै खोज्दै हिड्दा जब प्रहरीले युवक फेला पार्यो ! प्रहरी नै अक्क न बक्क !
मात्र एउटा आलुले यस्ताे सम्म गर्न सक्छ, थाहा पौड सबै चकित हुने !